Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguShaik Imran
Inkulu kwaye intle i-5 BDR ikhaya lemizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMelbourne kunye ne-15 min ukuya kumbindi wesixeko saseMelbourne. Iindawo ezi-3 zokuhlala ezinefanitshala, ikhitshi entle evulekileyo ecwangcisiweyo. Awudinwa? Emva koko i-NETFLIX yethu encomekayo kunye negumbi lethu leMidlalo kunye ne-tennis yetafile kunye ne-foosball. Kukho amagumbi okuhlambela ama-3, indawo yokuhlamba impahla eneWasha kunye nesomisi, ukupholisa okuphuphumayo. Super Fast wifi, yokupaka & isidlo sakusasa zibonelelwe. Asizamkeli iindwendwe ezibhukishayo ezingaphantsi kweminyaka engama-25 ngaphandle komlinganiselo wangaphambili we-Airbnb. - AKUKHO AMAQATHA NGCACILEYO.
Sakha ikhaya lethu kwiminyaka engama-30 eyadlulayo kwaye ngoku ikhaya lethu lokulala eli-5 liye lalungiswa kakhulu ngaphakathi, idyasi entsha yepeyinti, imigangatho, ifenitshala, amagumbi okuhlambela amatsha, iibhedi kunye nezixhobo zombane.
Kukho amagumbi okulala ama-2 anewodrophu yokuhamba, kwaye amanye ama-3 aneewodrophu ezakhelwe ngaphakathi. Ikhitshi eliphangaleleyo elinazo zonke izibonelelo ezibonelelweyo ukunceda wena nosapho lwakho ukupheka isidlo.
Izindlu zokuhlambela ezi-3 ezinezixhobo eziphambili ezibonelelweyo. Kukho iindawo zokuhlala ezi-3 ezahlukeneyo ezixhotyiswe nge-smart tvs eziqhagamshelwe kwi-NBN ekhawuleza kakhulu. Kukho indawo yokusebenzela ukuqinisekisa ukuba akukho nto ithotywayo. Sikwabonelela ngeNETFLIX yasimahla KUBO BONKE oomabonakude bethu.
Ngaba ujonge ukuthatha ikhefu emsebenzini? Senza igumbi lemidlalo elinentenetya yetafile kunye ne-foosball. Kukho neentlobo ngeentlobo zemidlalo yebhodi yokugcina usapho lonke lonwabile.
Ikhaya lethu likweyona ndawo ifunwa kakhulu eMelbourne; Imizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yokuthenga yaseWestfield, i-5mins ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMelbourne kunye ne-15mins nje ukusuka kumbindi wesixeko saseMelbourne. Uthutho lwasekhaya luhambo lwe-6min.
Kumgama nje we-4mins kude nephuli ye-surf edumileyo eTullamarine!
Ukusefa edolophini - 4mins kude
Iziko lokuThenga laseWestfield-5mins kude
Isikhululo seenqwelomoya saseMelbourne-imizuzu emi-5 kude
Iziko lokuthenga iBroadmeadows-i-8mins kude
Iziko leSixeko saseMelbourne-15mins kude
Local 7/11 , pizza , burger, chicken, shop drink - 5min walk
Umbuki zindwendwe ngu- Shaik Imran
Ungaqhagamshelana nam ngeMobile okanye nge-imeyile 24/7.
UShaik Imran yi-Superhost